Maamulka 'Jubbaland' Oo Gacanta Ka Taagtay Dhulka Boobka Kenya Ee Beled Xaawo Baaq Gacan Haatin Ahna udiray Dowladda Federaalka.
Thursday December 28, 2017 - 11:41:49 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Kenya wali ay wadaan dhaq dhaqaayqadii ay ku boobayeen dhul hor leh oo ay leeyihiin shacabka muslimiinta soomalida.
Boqolaal askari Kenyaan ah oo wata gaadiidka gaashaaman ayaa la sheegay in ay kusoo dhowaadeen magaalada xuduud beenaadka kulaasha ee Beled Xaawo waxaana lafilayaa isku dhacyo dhaxmara soo duulayaasha iyo dadka deegaanka.
inkastoo ciidanka Kenya laga eryay daafaha magaalada oo ay ka wadeen guryo burburin hadane wali waxaa taagan xiisadda, waxgaradka Beled Xaawo ayaa warbaahinta u sheegay in Kenyaatigu ay damacsanyihiin dhul boob hor leh.
Dhinaca kale mid kamid ah mas’uuliyiinta maamulka ‘Jubbaland’ oo Beled Xaawo gaaray ayaa qiray in talo farahooda ka baxday islamarkaana dowladda Kenya ay jabisay wax uu ugu yeeray Heshiis ay horay ula gashay DF-ka.
Cabdi Rashiid Janan oo ku magacaaban wasiirka ammaanka maamulka Axmed Madoobe ayaa ugu baaqay dowladda Federaalka in si degdeg ah ay kusoo farageliso arrinta Beled Xaawo”dowladda Kenya waxa ay waddo waa dhul boob aan laqaadan Karin waxaan ugu baaqayaa dowladda Federaalka in si degdeg ah ay arrinta usoo farageliso” ayuu yiri Cabdi Rashiid Janan.
iyadoo sidaas ay Kenyaatigu uboobayaan inta ka hartay dhulka Soomaalida ayay dowladda Federaalka sheegaysaa in ay la wareegeyso maamulidda Hawada dalka taas oo ah wax aan isqabaneynin.
DF-ka iyo dhammaan maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya ayaa dabadhilifyo u ah dowladaha Kenya iyo Itoobiya oo gumeysi ku haya shacabka Soomaaliyeed.